Maamulka Gobolka Benaadir ayaa ka shiray xaaladda amni xumo | KEYDMEDIA ONLINE
Maamulka Gobolka Benaadir ayaa ka shiray xaaladda amni xumo
Waxaa toddobaadyadii u dambeeyay isa soo tarayay xaalad amni xumo taasoo sababtay in ay dillaacaan tuugo dadka ka qaadaneysa Mobile -lada, Computer -rada iyo alaabaha qaaliga ah!
MUQDISHO, Soomaaliya - Maamulka Gobolka Benaadi ayaa maanta shir ka dhacay xarunta Aqalka Dowladda Hoose ee Xamar waxay uga hadleen xaaladda Amni xumo ee maalmahan laga dareemayo gobolka Benaadir, waxaana warbixinno laga dhagaystay mas'uuliyiinta degmooyinka ee qaabilsan amniga iyo Siyaasadda.
Guddoomiye ku xigeenka Amniga iyo Siyaasadda Gobolka Benaadir Cali Yare ayaa shir guddoominayay shirka oo ay kasoo qeyb galeen mas'uuliyiin dhowra oo ka tirsan maamulka Gobolka Benaadir. Kulanka ayaa lagu faaqiday cabashooyin ka imaanayey shacabka oo la xariira kooxo hubeysan oo xiliyada habeenkii dhac geystay,
Waxaa kale oo looga hadlay sidii loo xoojin lahaa wadashaqeynta u dhaxeysa shacabka, laamaha amniga iyo maamulada degmooyinka, si meel looga soo wada jeesto, loogana feejignaado dhagaraha ay cadowgu maleegayaan.
Magaalada Muqdisho xilliyada ay ku jirto kala guurka waxaa soo bata dhaca iyo dhibaatada loo geysto dadka shacabka ah, waxaana taa u sababa in qeybaha kala duwan ee ciidamada iyo dhammaan mas'uuliyiinta amniga ku shaqada leh ay ku mashquuulsan yihiin siyaasadda, iyadoo loo tafa-xeydanayo sidii qof waliba uu sad-bursi u heli lahaa, ciidamadana waxay ku qamaamaan dadka shacabka ah oo ay ka furtaan Mobile -lada iyo waxyaabaha qaaliga ah ee ay haystaan!